बाख्रा व्यवसायीमा रमाएका डोटीका देवबहादुर (भिडियोसहित) – SaipalNews.com
Friday, 20, May, 2022	info@saipalnews.com
बाख्रा व्यवसायीमा रमाएका डोटीका देवबहादुर (भिडियोसहित)
काठमाडौं २६ चैत । नेपालमा न काम छ,न नाम,न दाम ! यस्तै भन्नेहरूको जमात युवा पङ्तीमा ठुलो छ । त्यहि जमातबाट दैनिक हज्जारौँ युवाहरू परदेश भासिन्छन् । यसरी विदेशिदा उनिहरूको मनभरी विदेशको कमाईले सुखमय जीवन जिउने सपना हुन्छ ।
तर त्यो सपना पुरा होला या नहोला ? यही प्रश्नले घोचिरहेको हुन्छ उनिहरूको मन । कैयौँका भएका पनि होलान सपना पुरा, तर कैयौका सपना भने आधाअधुरा नै रहेका खबर हामी बेलाबखत सुन्दै आएका छौ । कैयौं बन्दी बाकसमा फर्किएका खबर सुन्दा कम्ति दुख्दैन नेपाली मन ।
विदेशिनेहरूका कुरा छाडौँ । केही यस्ता पात्र पनि छन्, जो नेपालमै नाम र दाम कमाउन सकिन्छ भन्ने अदम्य साहस बोक्छन् । त्यो साहसलाई शक्तिमा बदलेर काम थाल्छन्, र देशभित्रै खुशाल जीवन रचना गरिरहेका छन् ।
यी हुन्, डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका ७ का देवबहादुर बोगटी । जो १० वर्ष भारतका विभिन्न सहरदेखि दुबईसम्म चहारे । यसरी विदेश सफरको उद्देश्य थियो–टन्न पैसा कमाउने, सहरमा घरघडेरी जोड्ने, सुखसयलको जीवन जीउने।
विदेश चहार्दा देवबहादुरको १० वर्ष वित्यो । सपनाको न घरघडेरी जोडियो, नत सोचे जस्तो कमाई नै भयो । निराश देवबहादुर सोच्नथाले अब विदेशमा काम गरेर सकिन्न । वितेका दशबर्षको लेखाजोजा गर्दै उनले निर्णय लिए स्वदेश फर्कने र यहीँ केही इलम गर्ने । साथमा २–३ लाख रुपैयाँ बचेको कमाई थियो ।
स्वदेश फर्किएपछि बाख्रापालन व्यवसायको योजना बनाए ।२०७३ सालदेखि बोगटी कृषि बाख्रा तथा पशुपंक्षी फर्म दर्ता गरेर बाख्रा पालन व्यवसाय सुरु गरेका हुन् ।
बाख्रापालनले रंग दियो । राम्रो आम्दानी दिनथाल्यो । सुखमय् जीवनका सपना पुरा गर्न १० वर्ष विदेश बस्दा पुरा नभएका उनका सपना गाउँमै गरेको बाख्रापालन व्यवसायले पुरा गरिदिएको छ । १० वर्ष विदेश बसेर फर्किएका देववबहादुर अहिले स्वदेशमा केही छैन भन्ने युवा जमातका लागि फरक उदाहरण बनेर उदाएका छन् ।
डोटी र अछामको सीमाना चौखुट्टेबजारबाट साढे तीन किलोटर हिँडेपछि देववहादुरको बाख्राखोर पुगिन्छ । चौरतिर घना जंगलबीचमा खुल्लाचौर छ । त्यहिबीचमा छ,देवबहादुरको बाख्राखोर ।
हेरौँ देवबहादुरले १ लाखबाट सुरु गरेको बाख्रापालन व्यवसाय ? कति छन् बाख्रा ! कस्तो छ कमाई ? के भन्छन् देवबहादुर ! सुनौं उनकै मुखबाट
देवबहादुरको गाउँ दुल्लबस्ता बाख्रापालनका लागि उपयुक्त छ । चारैतिर घना जंगलै–जंगलै भएकाले बाख्राको चरिचरनमा पर्याप्त ठाउँ छ । खप्तडको फेदी र लेकाली भेगको जडिबुटीसहितको अर्गानिक चरन भएकाले यहाँ उत्पादित खसिबोका आकर्षक देखिन्छन् । जसले राम्रो मूल्य पनि पाउने गरेका छन् ।
यद्यपी यही वन बाख्रापालन व्यवस्थामा अत्याधिक समय व्यवधान खडा गरिदिन्छ । खप्तडी चितुवाहरु आएर ठुल्ठुला खसिबोका र बाख्रा लगिदिन्छ । स्यालहरु पाठाहरु उठाएर लगिदिन्छ । जसले बर्षेनी लाखौ क्षती भोग्नुपरेको बोगटी परिवारको गुनासो छ ।
भनिन्छ,श्रीमान सफल हुनुको पछाडी श्रीमतीको हात हुन्छ । हो, विदेशको दशकको बसाईले निराश देवबहादुरले आफ्ना सपनाहरू हारिसकेका थिए । हारेका देवबहादुरलाई स्वदेशमै बाख्रापालन गरेर सपनाहरूलाई पुनर्जीवन दिनसकिन्छ भन्ने उत्प्रेरणा उनकै पत्नि विस्नादेवीको हात छ । जसले आज देवबहादुरलाई उर्जा भरेर स्वदेशमै सफलता हासिल गर्ने अवसर दिएको छ ।
बोगटी परिवारले व्यवसायी रुपमा बाख्रापालन थालेको अहिले ५÷६ वर्ष भयो । चारबर्षको कमाईले बोगटी परिवारमा उत्कट खुशी दिईसकेको छ ।
अहिले वार्षिक ८–१० लाखको बाख्रा बिक्रीगर्ने गरेको देवबहादुर बताउँछन् । उनी आफ्नो बाख्रा अर्गानिक उत्पादन रहेको बताउछन् । लेकचरेका बाख्राको मासु स्वास्थ्यकर हुने दाबी गर्दै आफ्नो खोरका बाख्रा धेरै मानिसको रोजाईमा परेको बताउछन् । मागअनुसार बाख्रा आपूर्ति गर्न नसकिएको उनको भनाई छ ।
अहिले बोगटीको खोरमा बोयर जातका बोकासहित ढेडसयभन्दा बढी बाख्रा छन् । यी बाख्राबाटै बोगटी परिवारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी कैलालीमा घरघडेरी जोड्नुका साथै डोटी र आछामको सि
खप्तड जाने पर्यटकलाई लक्षितगर्दै चौखुट्टैमा यो होटल सञ्चालन गरेका हुन् । सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र खप्तड जाने एउटाबाटो चौखुट्टैबजारमै पर्छ । त्यहिबाटोको मुखैमा छ, देवबहादुरको–खप्तड होटल ।
मुख्य त यो होटल खप्तड जाने पर्यटकलाई लक्षित गरि सञ्चालन गरेको हो । बाहिरबाट खप्तड घुम्न आउने पर्यटकलाई खान बस्न र खप्तड घुम्न जाँदा कुनै समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको देबहादुरका भाइ भारत बोगटी बताउँछन् ।
डोटीमा नमूना कृषक बन्दै गएका देवबहादुर विदेशमा समय बर्बाद गर्नुभन्दा स्वदेशमै पसिना बगाए सुन फलाउन सकिने आफ्नो अनुभव सुनाउछन् । हाल विदेशिएका युवाहरुलाई विदेशको चर्काे घामको ताप–राप सहनुभन्दा स्वदेशमै आएर पसिना बगाउन आह्वान गर्छन् । भिडियो हेर्नु यहाँ क्लिक गर्नुस् ।https://www.youtube.com/watch?v=qkb7f4JE3qc
कांग्रेसका संविधानसभाका सदस्य एमाले प्रवेश
काभ्रेमा भएको ट्रक दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु
८ हजार घुससहित सीडीओ कार्यालय नासु पक्राउ
डब्ल्यूएचओले भन्यो कोरोना कसले धेरै फैलाइरहेका छन् यो हेर्नुस्
कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न साँझसम्म समय
७० करोड’को नेपथ्य,गोकुलको बहुचर्चित अडियो काण्ड
दुईतिहाइ सरकारको निरीहताप्रति दया लाग्यो: मोहन वैद्य